Ndeapi mabasa ekurapa ekuzvishandira masevhisi - Shenzhen JAK Medical Technology Co., Ltd.
Tifonere +86 13802272098
medical self service kudhinda uye inosunga muchina
medical self basa muchina
yakazvimiririra sevhisi firimu muchina
Imba > Nhau > Indasitiri nhau > Ndeapi mashandiro emakiriniki ekuzvishandira-ekuzvimirira
Ndeapi mashandiro emakiriniki ekuzvishandira-ekuzvimirira
Panguva ino, matambudziko aripo muzvipatara anonyanya kusanganisira, semuenzaniso: nguva refu yekumirira kunyoreswa, nguva refu yekumwa mushonga, nguva refu yekubhadhara, nguva pfupi yekuongororwa nekurapwa, nezvimwewo. kushandiswa kwakawanda kwenzvimbo dzekurapa dzekuzvishandira, varwere havachafanirwa kumhanya-mhanya kunyoresa, kubhadhara, uye kudhinda mishumo, uye kugona kwekurapwa kwave kunatsiridzwa.
Parizvino,self-sevhisi yekupedzisira kubhadharainotsigira nzira dzakawanda dzekubhadhara. Iyo bvunzo uye bvunzo dzevarabhoritari dzinoitwa nevarwere dzinogona kudhindwa pane inozvishandira-wega terminal. Kana murwere akaradzikwa muchipatara, runyorwa rwezuva rimwe chete rwekuchengetwa muchipatara rinogona kudhindwa. Uye zvakare, varwere vanogona kuongorora kugutsikana kwavanachiremba mune yekuzvirapa-sevhisi yekupedzisira, zvichiita manejimendi manejimendi kuve pachena.
Kubva pakuona kwechipatara, multifunctional medical self-service terminal inoiswa muhotera yekurapa. Murwere anogona kuita musangano uye kunyoresa pachiteshi chako chekuzvishandira achishandisa kadhi rekurapa kana kadhi rekuchengetedzwa kwevanhu, obva aenda kubazi kunorapwa uye kupedzisa bvunzo dzebazi uye bvunzo. Mushure mekunyora mushonga, unogona kuenda kuwindo kunyorera nekubhadhara muripo kuchipatara chekuzvishandira. Izvi hazvisi chete zvinoderedza kuwanda kwebasa rechipatara, asi zvakare zvinovandudza mashandiro ekubvunzana, zvinoderedza matatu marefu uye kamwe mapfupi matambudziko, zvinoderedza mashandiro echipatara, kupfupisa nzvimbo yekutarisira chipatara, uye kunatsiridza danho rebasa.
Kune varwere, varwere vanogona zvechokwadi kunakidzwa ne "one-stop" maitiro e "kunyoreswa, triage, mushonga, uye kubhadhara" kugadzirisa kuzvishandira, kugadzirisa ruzivo rwekurapa, kuwedzera kugutsikana, uye kuwiriranisa hukama hwechiremba-nemurwere.
Iyoyekuzvishandira seinogumira michinachese chipatara chinotsigira murwere wega-kubatsira faira kugadzira, kunyoreswa, kunyoreswa, kuongorora kuzvishambadzira, uye kubvunza mutengo.
Zvinoenderana nekuvandudzwa kwechipatara, inogona kukwidziridzwa pasina kuchinja muchina. Kambani yedu yakagadzira huwandu hwakawanda hweanokwidziridzwa makiti eichi chinongedzo kuti asangane nemabasa matsva anoshanda echipatara panguva yehupenyu hwemidziyo (makore 3-7): rutsigiro rwekuiswa kwemakadhi eID uye kuverenga kadhi rekurapa Mudziyo, inishuwarenzi yekurapa kadhi kadhi , kadhi rinoburitsa, color laser printer, nezvimwe.
Inobvumira anoshanda kuti ave neakanakisa kuzivikanwa kushanda kwehurefu, uye nekuona kwese (kwakabatana) mashandiro munzvimbo imwechete: isa kadhi, swipe kadhi, tarisa imwechete-yekodhi kodhi, maviri-mativi kodhi, Kadhi kadhi yekuverenga, inishuwarenzi yekurapa kadhi kuverenga, bhangi Kadhi uye mamwe mashandiro chete Zviri nyore kubata nema inchi ese ekuda.
Inesarudzo yepamusoro-inoshanda yakawanda-bhokisi bhokisi yekudhinda yuniti haigone chete kuwana yakakwira-kugona kudhinda kuburitsa anosvika makumi matatu mapeji paminiti, asi zvakare kuzadzisa yekudhinda nzira kuti uwane ese marudzi emishumo uye mafomu ekunyorera, kukwidziridza kubva pakuongorora wega-kudhinda kusvika chipatara-chakazara kuzvishambadzira: Kuongorora, ultrasound, pathology, ECG, marekodhi ekurapa, nezvimwe.
Yapfuura:Zvipatara zvekuzvishandira zvinogona kukubatsira kugadzirisa matambudziko iwayo?
2nd Floor, Mingdao Kuvaka, SEG Navigation Technology Park, No. 28 Cuibao Road, Baolong Industrial Zone, Longgang District, Shenzhen East divi
© Copyright 2020-2021 Shenzhen JAK Chiremba Technology Co., Ltd.